WhatsApp प्लस नवीनतम संस्करण APK Android को लागि डाउनलोड 2018
WhatsApp प्लस V6.50 डाउनलोड एन्ड्रोइड नवीनतम संस्करण 2018
You guys may need heard about Whatsapp Plus. यो वेब मा उत्तेजक आधिकारिक WhatsApp उपयोगिता बाहिर त्यहाँ भेरिएसनहरूमा एक संभावना छ. मामला मा तपाईं एक Android व्यक्ति हुन्, म तपाईं अतिरिक्त यो शानदार दूत उपयोगिता गर्न habituated हुनुहुन्छ कि someplace अस्वीकार received't wager गर्न सक्नुहुन्छ.
If that straightforward WhatsApp was that addicted so, घटनाको बारेमा के तपाईं peeps को लागू गर्न अतिरिक्त रोमाञ्चकारी ट्वीक्स गर्न केही लन्च प्राप्त? यो एकदम आकर्षक छ, उचित?
You can too test one other twin whatsapp app for android – Gb whatsapp
ल, I gotcha coated. त्यसैले, अतिरिक्त हलचल गरिरहेको बाहिर विषय आउन अनुमति दिन्छ.
दायाँ यो लेखको यहाँ, I’m going to crawl throughout WhatsApp Plus V6.50 for Android Latest Version 2017. तपाईं कसरी-जानकारी प्राप्त गर्न यसको विकल्प देखि स्वीकार अनुप्रयोग विषयमा हरेक र प्रत्येक भाग थाहा पाउनुहुन्छ.
Android को लागि WhatsApp प्लस नवीनतम APK डाउनलोड 2018
WhatsApp प्लस आधिकारिक WhatsApp एक परिमार्जन सुरक्षित क्लोन संस्करण हो. यो राम्रो UX आउँछ र धेरै शानदार विकल्प जो WhatsApp मा गैर-अस्तित्वहीन छ.
WhatsApp-प्लस सुरुमा Ralfanse विकास भएको थियो. तर दुःखको कुरा, this utility will not be working anymore asaresult of some points addressed by WhatsApp Inc. पछि, WhatsApp प्लस को mod APK अबू Hussein नाम विकासकर्ता विकास छ. यो mod APK अद्वितीय WhatsApp प्लस मा गरिएको छ जो विकल्पहरू सबै छ.
पनि हेर्नुहोस्: डाउनलोड WWE 2K17 (संयुक्त राज्य अमेरिका) पीसी खेल अत्यधिक संकुचित
विभिन्न भेरिएसनहरूमा भन्दा राम्रो-मनपराएका यो WhatsApp mod बनाउँछ जो कारक यो समावेश विकल्प छ. त्यसैले, गरेको यो आश्चर्यजनक mod ​​उपयोगिता छ विकल्प मा एक हेरौं.
WhatsApp प्लस को विकल्प
WhatsApp-प्लस शानदार विकल्प टन तपाईं यसलाई irresistible फेला पार्न जाँदै गर्न सकिन्छ कि छ. धेरै WhatsApp ग्राहकहरु यो APK अर्को फरक संभावना भन्दा धेरै आकर्षक र उच्च पत्ता. किनभने यो अन्तिम देखेको आवरण अनुरूप धेरै विशिष्ट विकल्प दिन्छ यो छ, बडा recordsdata पठाउने, video calls and way more inanutshell. Extra options of WhatsApp Plus permits you to share all types of audio recordsdata, चलचित्र, तस्वीर, र ई-पुस्तकहरू.
यसबाहेक जानुहोस् : दुष्ट PSP आईएसओ ANDROID मुफ्त खेल HELLBOY साइन्स [PSP + PPSSPP]
म WhatsApp प्लस यी शानदार विकल्प तपाईँले आफ्नो Android स्मार्टफोन मा मा राख्दै पछि प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर केही itemizing छु अन्तर्गत.
ढाकछोप अन्तिम देखेको, नीलो निशान, र डबल निशान.
सक्षम भिडियो नाम समारोह.
WhatsApp प्लस यो mod बाहिर त्यहाँ एउटा अद्वितीय विरोधी प्रतिबन्ध समारोह छ.
टिमलाई जहाज पाठ सामग्री प्रसारण (केवल पाठ सामग्री सन्देशहरू)
तपाईंले यो mod APK संग धेरै अनुकूलन विकल्पहरू प्राप्त.
तपाईंको WhatsApp प्लस को सुरुवात प्रतिमा परिवर्तन.
यसलाई कुनै पनि तेस्रो उत्सव अनुप्रयोग तपाईंको WhatsApp उपयोगिता लक मा निर्मित छ लक सिस्टम इरादा संग.
वाक्यांश स्थितिमा लागि प्रतिबन्ध द्वारा उच्च गरिएको छ 139 गर्न 255 वर्ण.
स्पष्ट च्याट गर्दा सन्देशहरू फिल्टर सम्भावित.
यसलाई प्राप्त र आफ्नो आवश्यकता अनुसार नयाँ विषयवस्तुहरू लागू गर्न एक जबरदस्त विषय इरादा संग सर्भर छ.
जोडी THEMED इमोजी & GIF खोज.
यो mod छ 13 बुलबुले मोडेल र 17 प्रकार टिकटिक.
तपाईं डाउनलोड भन्दा मिडिया पहिले पूर्वावलोकन गर्न सक्षम. यसलाई आफ्नो जानकारी बर्बाद जोगिन तपाईंले समर्थन गर्न.
अब तपाईं जहाज गर्न सक्षम 30 एमबी भिडियो. पहिले, को केवल थियो प्रतिबन्ध 16 एमबी.
जहाज 90 एक विकल्प रूपमा ढिलाइ बिना तस्वीर 10 प्रतिहरू.
सक्षम निवास स्थान साझेदारी.
Privateness mods & विषयवस्तुहरू mods.
डाउनलोड गर्ने सही तरिका & WhatsApp प्लस Android को लागि सेट अप?
You’ll be able to obtain WhatsApp Plus V6.50 for Android Latest Version 2017, अन्तर्गत दिइएको हाइपरलिङ्क देखि. यो उपयोगिता डाउनलोड बस सरल तर आफ्नो Android टेलिफोन मा मा राख्दै बारेमा एक बिट उन्नत छ, विशेष सम्बन्ध मा च्याट विगतका ऐतिहासिक गिर बाहिर संग WhatsApp एक mod ​​APK संस्करण मा राख्दै गर्न.
दयालु, comply with the given information step-by-step.
तपाईं के गर्न छ कि धेरै धेरै पहिलो कुरा हो, obtain WhatsApp Plus V6.50 from the above obtain button.
तपाईं यसलाई गुमाउन चाहनुहुन्छ छैन आफ्नो पहिले च्याट विगतका ऐतिहासिक को जगेडा लिन. For doing this primary head to your WhatsApp सेटिङहरू -> च्याट -> जगेडा -> click on on जगेडा कुराकानी, र पनि प्रदर्शन गर्दै हुनुहुन्छ.
Then you have to स्थापना रद्द WhatsApp out of your Android smartphone. यो जारी लागि, Go to your टेलिफोन सेटिङहरू -> अनुप्रयोगहरू -> WhatsApp -> स्थापना रद्द. कि यो छ.
अब यो तपाईं माथि प्राप्त हाइपरलिङ्क देखि डाउनलोड गर्नुभएको WhatsApp प्लस APK mod राख्न समय.
नवीनतम WhatsApp प्लस APK दायाँ यहाँ डाउनलोड
Miitomo APK डाउनलोड – मोबाइल लागि सबै भन्दा राम्रो अनुप्रयोग
ब्याटलसीपखेल: प्रशान्त रिम APK डाउनलोड को रोमी पल्टनमा युद्ध – मोबाइल लागि सबै भन्दा राम्रो अनुप्रयोग
Alive Wallpaper 1.8 APK एन्ड्रोइड
ग्यालरी APK डाउनलोड – Android को लागि नि: शुल्क फोटोग्राफी अनुप्रयोग | मोबाइल लागि सबै भन्दा राम्रो अनुप्रयोग
Duolingo: Learn Languages Free APK Download – मोबाइल लागि सबै भन्दा राम्रो अनुप्रयोग
धातु गियर बढ्दो Revengeance (क्षेत्र फ्री) पीसी खेल डाउनलोड
झडप रोयाले APK डाउनलोड – मोबाइल लागि सबै भन्दा राम्रो अनुप्रयोग
मोटो सवार APK डाउनलोड – Free Racing…
पकेट MapleStory 1.0.1 APK | Download Best…
अमेजन appstore .APK डाउनलोड – सर्वश्रेष्ठ अनुप्रयोग…
BubbleUPnP APK डाउनलोड | लागि सर्वश्रेष्ठ अनुप्रयोग…
मेरो Tamagotchi सधैंभरि APK फ्री डाउनलोड | …
रोष्टर HD 2.0.2 एन्ड्रोइड APK